တိုတောင်းလှတဲ့လူ့ဘ၀ထဲမယ် ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပျော်အောင်နေပါ…💛😉 – Trend.com.mm
ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ လောကကြီးမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့သက်တမ်းက ခဏလေးပါ။ ဒီလိုသက်တမ်းကခဏလေးပင်မဲ့ လုပ်စရာကိုင်စရာအလုပ်တွေကတော့များသားဗျ…ဒီလိုအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်းပူလောင်တဲ့ အခိုက်တန့်တွေ ပျော်ရမဲ့ အခိုက်တန့်တွေ အများကြီးကို အမျိုးမျိုးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရမှာပါ။ ဒီလို အချိန်သိပ်မရှိလှတဲ့လူ့ဘ၀ထဲမှာလူဖြစ်လာရတုန်းကာလအတွင်းဒါမျိုးလေးတွေနဲ့သာ သင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင် ခဏလေးနေရလည်းဘ၀ကြီးကနေပျော်စရာကြီးဖြစ်နေမှာအသေချာပါပဲ…ဒီတော့ ဘယ်လိုနေပါ ဘယ်လိုထိုင်ပါလို့တော့ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပင်မဲ့ လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ ဘ၀ထဲမှာ လူဖြစ်ရတုန်းလေးနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေနဲ့နေထိုင်ပါ….
ကြိုးစားတဲ့လူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာဆိုတာရှိပါတယ်။ သေရင်ကိုယ့်နောက်မပါဘူးဆိုပင်မဲ့မသေခင်စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လုပ်ရှားရအုံးမှာပဲမလား။ ဆိုတော့ ကျွန်တေ်ာတို့ဘ၀မှာ ရိုးရိုးသားသားနဲ့တစ်ခုခုကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရတဲ့အချိန်ဟာ သိပ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိပြီးနေပျော်စရာအချိန်တစ်ခုပါပဲ။
ရိုးသားမှုနဲ့နေထိုင်ပါ။ ဘာလုပ်လုပ်ရိုးရိုးသားသားလုပ်ပါ။ ဘာပြောပြော ဖြစ်နိုင်ရင်ရိုးရိုးသားသားပြောပါ(ကိုယ့်ရိုးသားမှုက ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ရင်ပေါ့) ဒီလိုရိုးသားမှုတွေကြောင့် သင်လူဝင်ဆန့်လာပြီးစိတ်ရင်းမှန်ပေါင်းသင်းတဲ့သူတွေနဲ့သာသင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားရင် စိတ်မလုံစရာစိတ်ညစ်စရာကိစ္စဆိုတာသင့်မှာမရှိတော့တာမလို့ ဘ၀ကြီးကနေပျော်စရာကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
တာဝန်ယူစိတ်နဲ့သိတတ်စိတ်ရှိပါစေ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သိပြီးကိုယ်တာဝန်ယူရမဲ့အရာကို သေသေချာချာတာဝန်ယူတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ ဒါဆိုရင်တော့သင့်ဘ၀မှာ အောင်မြင်လွန်းတဲ့သူမဖြစ်ရင်တောင်အပြစ်ကင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်အေးအေးလူလူနေထိုင်နိုင်မှာပါ။
သိပ်ကိုခက်ခဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးပါပဲ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့လူ့ဘ၀ထဲမှာ ဒေါသတွေ အမုန်းတရားတွေတတ်နိုင်သမျှလျော့ချပြီူး အတတ်နိုင်ဆုံးအတိုင်းတာတစ်ခုထိသည်းခံတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။ဒါဆိုရင်တော့သင် ပူလောင်မှုနေကင်းဝေးသွားမှာပါ။
တတ်နိင်သလောက်ကြိုးစားပါ။ ဖြစ်လာသမျှကောင်းမွေဆိုးမွေကို ရောင့်ရဲတတ်ပါစေ။ မကြိုးစားပဲ ရောင့်ရဲခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကြိုးစားရင်းနဲ့ကို ကိုယ့်ရလဒ်မှန်သမျှ ကိုယ် ရောင့်ရဲနိုင်ပါစေ။
ဒီလိုအချက်လေးတွေသာ ကျွန်တော်တို့တွေနေထိုင်မယ်ဆိုရင် လူ့ဘ၀ကြီးမှာခံစားရမဲ့ နာကျင်မှုတွေ ပင်ပန်းမှုဒဏ်တွေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကို အနည်းနဲ့များတော့ ဖြေလျော့နိုင်မှာ
အသေချာပါပဲ…လူတိုင်းလူတိုင်း ပျော်ရွှင်တဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးရဖို့ ၊ လောကကြီးမှာနေပျော်ဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူမှသာ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ နှလုံးသွင်းထားနိုင်ရင် အားလုံးအိုကေပါတယ်ဗျာ…😉
ကြှနျတျောတို့ခငျဗြားတို့သိတဲ့အတိုငျးပဲ လောကကွီးမှာလူတဈယောကျရဲ့သကျတမျးက ခဏလေးပါ။ ဒီလိုသကျတမျးကခဏလေးပငျမဲ့ လုပျစရာကိုငျစရာအလုပျတှကေတော့မြားသားဗြ…ဒီလိုအလုပျတှကေို လုပျကိုငျရငျးပူလောငျတဲ့ အခိုကျတနျ့တှေ ပြျောရမဲ့ အခိုကျတနျ့တှေ အမြားကွီးကို အမြိုးမြိုးဖွတျကြျောခဲ့ရမှာပါ။ ဒီလို အခြိနျသိပျမရှိလှတဲ့လူ့ဘဝထဲမှာလူဖွဈလာရတုနျးကာလအတှငျးဒါမြိုးလေးတှနေဲ့သာ သငျနနေိုငျမယျဆိုရငျ ခဏလေးနရေလညျးဘဝကွီးကနပြေျောစရာကွီးဖွဈနမှောအသခြောပါပဲ…ဒီတော့ ဘယျလိုနပေါ ဘယျလိုထိုငျပါလို့တော့ဆရာကွီးလုပျတာမဟုတျပငျမဲ့ လူတိုငျးလိုခငျြတဲ့ စိတျခမျြးသာစရာကောငျးတဲ့ ဘဝထဲမှာ လူဖွဈရတုနျးလေးနထေိုငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒါလေးတှနေဲ့နထေိုငျပါ….
ကွိုးစားတဲ့လူတိုငျးနဲ့ထိုကျတနျတဲ့အရာဆိုတာရှိပါတယျ။ သရေငျကိုယျ့နောကျမပါဘူးဆိုပငျမဲ့မသခေငျစားဝတျနရေေးအတှကျ ရုနျးကနျလုပျရှားရအုံးမှာပဲမလား။ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ ရိုးရိုးသားသားနဲ့တဈခုခုကို ကွိုးစားလုပျကိုငျနရေတဲ့အခြိနျဟာ သိပျကိုအဓိပ်ပါယျရှိပွီးနပြေျောစရာအခြိနျတဈခုပါပဲ။
ရိုးသားမှုနဲ့နထေိုငျပါ။ ဘာလုပျလုပျရိုးရိုးသားသားလုပျပါ။ ဘာပွောပွော ဖွဈနိုငျရငျရိုးရိုးသားသားပွောပါ(ကိုယျ့ရိုးသားမှုက ဘယျသူ့ကိုမှမထိခိုကျရငျပေါ့) ဒီလိုရိုးသားမှုတှကွေောငျ့ သငျလူဝငျဆနျ့လာပွီးစိတျရငျးမှနျပေါငျးသငျးတဲ့သူတှနေဲ့သာသငျကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ရိုးသားရငျ စိတျမလုံစရာစိတျညဈစရာကိစ်စဆိုတာသငျ့မှာမရှိတော့တာမလို့ ဘဝကွီးကနပြေျောစရာကွီးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
တာဝနျယူစိတျနဲ့သိတတျစိတျရှိပါစေ။ ကိုယျ့အလုပျကိုယျသိပွီးကိုယျတာဝနျယူရမဲ့အရာကို သသေခြောခြာတာဝနျယူတတျတဲ့သူဖွဈပါစေ။ ဒါဆိုရငျတော့သငျ့ဘဝမှာ အောငျမွငျလှနျးတဲ့သူမဖွဈရငျတောငျအပွဈကငျးတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈအေးအေးလူလူနထေိုငျနိုငျမှာပါ။
သိပျကိုခကျခဲတဲ့စိတျဓာတျကွီးပါပဲ။ တကယျလုပျမယျဆိုရငျတော့လှယျပါတယျ။ တိုတောငျးလှတဲ့လူ့ဘဝထဲမှာ ဒေါသတှေ အမုနျးတရားတှတေတျနိုငျသမြှလြော့ခပြွီူး အတတျနိုငျဆုံးအတိုငျးတာတဈခုထိသညျးခံတတျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါစေ။ဒါဆိုရငျတော့သငျ ပူလောငျမှုနကေငျးဝေးသှားမှာပါ။
တတျနိငျသလောကျကွိုးစားပါ။ ဖွဈလာသမြှကောငျးမှဆေိုးမှကေို ရောငျ့ရဲတတျပါစေ။ မကွိုးစားပဲ ရောငျ့ရဲခိုငျးတာမြိုးမဟုတျပဲ ကွိုးစားရငျးနဲ့ကို ကိုယျ့ရလဒျမှနျသမြှ ကိုယျ ရောငျ့ရဲနိုငျပါစေ။
ဒီလိုအခကျြလေးတှသော ကြှနျတျောတို့တှနေထေိုငျမယျဆိုရငျ လူ့ဘဝကွီးမှာခံစားရမဲ့ နာကငျြမှုတှေ ပငျပနျးမှုဒဏျတှေ စိတျဆငျးရဲစရာတှကေို အနညျးနဲ့မြားတော့ ဖွလြေော့နိုငျမှာ
အသခြောပါပဲ…လူတိုငျးလူတိုငျး ပြျောရှငျတဲ့ လူ့ဘဝကွီးရဖို့ ၊ လောကကွီးမှာနပြေျောဖို့ ကိုယျကိုယျတိုငျဖနျတီးယူမှသာ ရနိုငျတယျဆိုတာ နှလုံးသှငျးထားနိုငျရငျ အားလုံးအိုကပေါတယျဗြာ…